Canadian kaadị mgbanwe Coinsquare ewelite $ 30M - Blockchain News
Canadian cryptocurrency mgbanwe Coinsquare welitere $30 nde ke ọhụrụ hara nhatanha ego.
mara ọkwa taa, ego e mere site ego ọrụ ike Canaccord Genuity na “ga-eji na-eme ka a zuru ụwa ọnụ ibu plan…”
Part nke na push ga-agụnye ego dị ọtụtụ dị ka 100 ọrụ na-abịa abịa ọnwa, na-anya nwere 200 ọrụ na-arụ ọrụ maka mgbanwe site na nke abụọ nkeji iri na ise nke afọ a
“Anyị na-ọduọ, ma ọduọ ime ya nri. Anyị na-aga na-agadi-akwụkwọ ụzọ dị ka ihe IPO na Toronto Stock Exchange,” Cole Diamond, Coinsquare CEO, E kwuru, sị.
Coinsquare kwuru, sị ya mgbasa atụmatụ na-agụnye investments na cryptocurrency Ngwuputa, mwepụta nke a Trading na Arbitrage nkewa na e kere eke nke ego “lekwasịrị anya investments gafee digital akpan owo odida obodo” nke a ga-akpọ CoinCap ego.
Previous Post:Olee otú ike kaadị Exchange
Next Post:Gịnị mere ndị Binance Exchange na mgbe ọnụ ekwegasịrị amalite
Ka 11, 2018 na 6:34 AM